» सिनेमा घरमा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:०३ प्रकाशित
चितवन, असोज ३ – बर्षको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ आजबाट देशभर एक साथ प्रदर्शन भएको छ । ‘कबड्डी’ र ‘कबड्डी कबड्डी’ जस्ता हिट सिरिजकै कारण यो चलचित्रबाट पनि दर्शकह्रुले ठुलो आशा गरेका छन् ।
रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’मा दयाहाङ राई, उपसना सिंह ठकुरी,कर्मा शाक्य, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, पुस्कर गरुङ, कविता आले, लोनिभा तलाधर, कमल मनी नेपाल अरुणा कार्की पोखरेल, शिला खनाल मनी के. राई लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
लचित्रमा मणिराम पोखरेल, अर्जुन कार्की र ओम चन्द्र रौनियारको लगानी रहेको छ । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को कथा निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका हुन् ।शैलेन्द्र डि. कार्कीले छायांकन गरको फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गरेका छन् ।